Chiso chekuchamhembe kwemoyo, iyo nyowani yematsotsi naDolores Redondo | Zvazvino Zvinyorwa
Chiso chekuchamhembe chemoyo
Chiso chekuchamhembe chemoyo (2019) ndiko kudzoka kwaDolores Redondo mushure mekubudirira Baztán Trilogy. Ehe, mushure me "kuzorora" kwehunhu hwaAmaia Salazar kwemakore akati, basa iri rinotiunzira. Yakanga iri nguva yakafanana ine zvibereko kumunyori wechiSpanish, sezvinoonekwa neanozadza mubairo Zvese izvi ndichakupa (2016). Muchikamu chitsva ichi chekunyora, Redondo anotora vaverengi kumashure munguva, kune gore 2005.
Mune inovairi, munyori anorondedzera zvakaitika kuna Salazar (ane makore makumi maviri nemashanu) panguva yechirongwa chekuchinjana pakati pevakuru veEuropol kuFBI Academy muQuantico. Ikoko, aimbova mutevedzeri wemupurisa wemapurisa eProvince anotora chikamu chaicho chinotungamirwa naAloisius Dupree, mukuru wezve kuferefeta. Uyu ndiye "Munyori", mhondi inoteedzana nekurwisa mhuri dzese panguva yenjodzi huru ... uye Katrina kwaive kuuya.
1 Nezve munyori, Dolores Redondo
1.1 Baztán trilogy
2 Nhoroondo nhema yaDolores Redondo
3 Mamiriro ezvinhu eNorth Face yeMoyo, sekureva kwaDolores Redondo
4 Plot, kuongorora uye mavara eNorth uso weMoyo
4.1 Maitiro e Forensic uye Criminology Course
4.3 Tete Engrasi
4.4 Hushamwari naAloisius Dupree
Nezve munyori, Dolores Redondo
Dolores Redondo Meira akaberekwa muna Kukadzi 1, 1969, muPasajes, guta riri mumahombekombe egungwa pedyo neSan Sebastián, Spain. Iye ndiye dangwe rehama ina, mhedzisiro yemubatanidzwa pakati pemufambisi wechikepe nemukadzi wemba, vese vanobva kuGalician. Akatanga kunyora nyaya pfupi uye nyaya dzevana kubva pamakore gumi nemana. Gare gare, akanyoresa kuYunivhesiti yeDeusto kuti adzidze Mutemo, asi haana kuzopedza degree racho.
Gare gare, akadzidziswa mukudzoreredza kwechikafu nechinangwa chekuve shefu; Akatovhura yake yekudyira muSan Sebastián. Kubva 2006, Dolores Redondo anogara kuCintruénigo - taundi diki muNavarra Ribera - kwaakatanga kuzvipira kuzere kunyora. Muna 2009 akaburitsa bhuku rake rekutanga, Ropafadzo dzemutumwa. Anenge makore mana gare gare akazvitsaura ne Baztán trilogy.
Aya akateedzana achitarisa muongorori weNaparra Provincial Police, Amaia Salazar, akachinja Dolores Redondo kuita munyori best seller. Nemakopi anodarika mazana manomwe ezviuru akatengeswa uye neshanduro dzemitauro inopfuura gumi neshanu. Inosanganisira Muchengeti asingaoneki (Ndira 2013), Nhaka mumapfupa (Mbudzi 2013) uye Kupa dutu (Mbudzi 2014).
Nhoroondo nhema yaDolores Redondo
The portal Ravot Arts (Chivabvu 2015), inoratidza "kugona kwemunyori kuita kuferefeta uye hupenyu hwemuongorori kuenda pamwe chete, asi kwete nenzira yakafanana asi yakabatana ”. Iyo, pamwe chete neiri fluid, inowirirana rondedzero manyorerwo, yakawanda muzvinyorwa zvinyorwa uye isina musono muchirevo, inoumba iwo wakasarudzika manyorero ematsotsi enhau akagadzirwa naDolores Redondo.
In the Baztán Trilogy, vanopikisa vanovhiringidza vaongorori kuburikidza nenhamba dzengano dzinozivikanwa munyika yeBasque: Basajaun, Tarttalo uye Inguma. Ipo mukati Chiso chekuchamhembe chemoyo Dolores Redondo anogadzira serial mhondi yakavharidzirwa yemamiriro ekunze chaiwo "chikara" (Dutu Katrina). Ichi chiitiko chakava imwe yenjodzi dzinozivikanwa kwazvo dzekutanga kwemireniyamu nyowani.
Mamiriro ezvinhu e Chiso chekuchamhembe chemoyo, sekureva kwaDolores Redondo
Muhurukuro yakapihwa kuna Pilar Sanz (yewebhu peji mundodelibros.com, Mbudzi 19, 2015), Redondo akatsanangura mamiriro echinyorwa chake chazvino.. Nezve izvi, akati:
"… Iyo trilogy izere nematanho anotungamira kuNew Orleans. Vazhinji vatambi vaive vatove vakaunzwa kune vaverengi netwumashanga. Chinangwa chekunyora nezve iyo chaiyo nguva, mushure mekupfuura kweHurricane Katrina (2005), ndakanga ndatova nayo kare, yaive chikwereti changu kuguta ”.
Uye ini ndinowedzera:
“Chamupupuri chinoitika chinowanzoitika. Izvo zvisina kujairika ndozvakazoitika mumashure, kusiiwa kwakatambudzwa nevanhu kwaive kupenga. Rubatsiro haruna kusvika mushure memaawa makumi maviri nemana kana makumi mana nemasere. Zvakatora mazuva mana uye panguva iyoyo zviuru zvevanhu zvakange zvafa nenyota, kupisa, kurwara. Chipatara chikuru chakakoromoka. Vacheche vakafa muma incubator! Njodzi yekuwedzeredza kusuwa kwevanhu ".
Plot, kuongorora uye mavara e Chiso chekuchamhembe chemoyo
Kubva pamashoko ekutanga, munyori anotara nzira yekugara analepsis uye prolepsis, izvo zvakakosha mukusimudzira kwekupokana.
“Amaia Salazar paakanga aine makore gumi nemaviri, akarasika musango kwemaawa gumi nematanhatu. Akanga ari mangwanani-ngwanani pavakamuwana mamaira makumi maviri kuchamhembe kwenzvimbo kwaakange arasika nzira.
“Yasviba nemvura inonaya, mbatya dzakasviba uye dzakapiswa sedzemuroyi wepakati nepakati akanunurwa kubva pamoto wemoto uye, mukupesana, ganda jena, rakachena uye rakagwamba kuita kunge richangobuda muchando. Amaia aigara achichengeta kuti iye haana kana kuyeuka chero chinhu cheizvozvo zvese. Paakangosiya nzira, clip yaive mundangariro yake yakangotora masekonzi mashoma emifananidzo yakadzokororwa yadzokororwa. "
Maitiro e Forensic uye Criminology Course
Mutsara naDolores Redondo.
Kutanga kweruzivo kunotora muverengi kuna2005, kunyanya kuguta reNew Orleans. Mune yehunyanzvi hwehunyanzvi hwedzidzo yakadzidziswa naAloisius Dupree, mukuru weboka rinoongorora reFBI, Amaia Salazar anokunda semubatsiri. Nekudaro, iye anopedzisira achiperekedza iyo FBI's Behaeveal Analysis Unit, uko munyori anoratidza ruzivo rwake rwese rwekuferefetwa kwemapurisa.
Iye hunhu husingazivikanwe hwakatsaurwa kuuraya mhuri dzese dzemhuri pasi peimwe yakasarudzika uye yakaoma modus operandi. Nhoroondo inoratidza kuti inorwisa pasi pemamiriro ekunze akaipisisa nechinangwa chekumisikidza zviitiko zvekupara mhosva nekuda kwekururama kwayo. Neichi chikonzero, Chief Dupree - uyo ave kuziva nezve zvipo zvisinganzwisisike zveAmaia - anotora Salazar sechikamu cheboka rake rekuongorora.
Kudanwa kwatete Engrasi kubva kuna Elizondo chinhu chakakosha murungano, sezvo ichiratidzira kushungurudzika kwese kwehudiki hwaAmaia. Idzo ndima dzinoshandira kusimbisa hunhu - hunoshamisa - hunhu hwemweya wepasipiti (unokosheswa naDupree). Saizvozvo, zvakakosha zvakakosha zvakaumba hunhu hwaSalazar zvinotsanangurwa, kusanganisira hukama hunonetsa nababa vake.
Nekudaro, chikuru chinhu mukushungurudzika kwepfungwa yemunhu mukuru ndiko kutya kusingaite kweamai vake. Mune mitsara iyi, muverengi anoshamisika nezviyero zvekushungurudzwa kwaakaitwa naAmaia achiri mudiki uye chikamu cheudiki hwake. Kushungurudzwa kunonyanya kukurirwa nekuda kwerudo rusingaperi uye kutsigirwa kwatete vake Engrasi.
Hushamwari naAloisius Dupree
Sezvo zviitiko zvinoitika, mukuru wekuferefeta anonzwisisa zvisingaenderane nenyaya yacho. Mune mamwe mazwi, mune ino kurangana kuri pachena pakati pezvakanaka nezvakaipa, zvakajairika nzira dzekupara mhosva dzinotadza. Saizvozvo, kupindira kwaAmaia kwakakosha mukutsvaga mhondi.
Kutenda kwaari "intuition", Amaia anotanga kuona akajeka kwazvo mazano ekubvisa uye manzwiro pakati pechiitiko chematsotsi. Nekudaro, Salazar haafanire kungoshanda chete neakanyanya psychopath uye yakanyanyisa mamiriro ekunze. Anofanirwawo kutarisana neruvengo rwevamwe nhengo dzeboka reFBI, kunyanya kusavimbika kwemumwe anegodo nemubatanidzwa.
Dolores Redondo akarumbidzwa kwazvo mumabhuku ekuongorora nezvegadziriro yakagadzirirwa renhoroondo yake. Zvinoenderana neiyo portal Rakanaka Sei Kuverenga! (Mbudzi 2019), "Hazvishamise kuti anokwanisa sei kugadzira iyo yakavharika, inotonhora uye inotyisidzira mhepo nekushandisa mvura isingaperi". Saizvozvowo, kufanana pakati pemhondi neHurricane Katrina kuitira kuratidza hutsinye hwakaenzana, kunoitwa zvinehunyanzvi.
Kunyanya zvinorwadza ndiwo zvikamu zvinotsanangura kuparadzwa muNew Orleans. Zvakare pamwe nekupisa kupisa uye mhepo yakaputira nekunhuhwirira kwerufu. Pane zvese, Chiso chekuchamhembe chemoyo ingano inorarama zvinoenderana nezvinotarisirwa zvakagadzirwa ne Baztán trilogy. Iri ibhuku rinokurudzirwa zvakanyanya kune vateveri ve iyo nhema nhema uye nezvose zvine hunhu zvezvinhu zvaDolores Redondo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Chiso chekuchamhembe chemoyo